DAAWO:Odayaasha Beelaha Muqdisho Oo soo Bandhigey tuhun wayn ay ka qabaan Qaraxii Gobolka Banaadir — CAASIMADA
Home Uncategorized DAAWO:Odayaasha Beelaha Muqdisho Oo soo Bandhigey tuhun wayn ay ka qabaan Qaraxii...
DAAWO:Odayaasha Beelaha Muqdisho Oo soo Bandhigey tuhun wayn ay ka qabaan Qaraxii Gobolka Banaadir
Muqdisho( CaasimadaTimes)-Odayaasha beelaha Muqdisho ayaa war ka soo saaray qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, waxayna shaaca ka qaadeen inay jirana tuhunno iyo su’aalo badan oo u baahan in dowladda ay ka jawaabto.
Waxgaradkan oo shir jaraa’id u qabtay Wariyeyaasha ayaa sheegay in dowladda looga fadhiyo inay si deg deg ah ku soo bandhigto baaritaanka dhacdadaasi.
Waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in la cadeeyo, sida uu ka dhacay weerarkaasi iyo cida fududeysay intaba.
Odayaasha ayaa xusay in xarunta dowladda hoose ay aheyd goob amnigeeda si weyn loo sugo, islamarkaana aysan suuragal aheyn in si fudud qarax lagu galiyo.
Sidoo kale wax ay tilmaameen in arrin lala yaabo ay tahay in weli Caasimada oo kala xiran la beegsanayo xarumihii dowladda, weeraraduna ay sii socdaan, iyadoo ciidamo badan ay ku sugan yihiin magaalada, howlgalladuna ay joogto yihiin.
Ugu dambeyn Odayaasha beelaha Muqdisho ayaa ka dalbaday madaxda dowladda federaalka inay la yimaadaan isbedal wax looga qabanayo nabad gelyada, sidoo kalena lagu yareynaya culeyska heysta shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir.
Ammaanka degmooyinka Muqdisho ayaa maalmihii dambe faraha ka sii baxayay, iyadoo ay ka dhacayeen weeraro iyo qaraxyo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab.
HOOSE KA DAAWO VIDEOGA ODAYAASHA
Previous articleOdayaasha Beelaha Muqdisho Oo soo Bandhigey tuhun wayn ay ka qabaan Qaraxii Gobolka Banaadir
Next articleKiambu county governor suspended
Ciidamada Itoobiya Oo lagu wareejiyey Kismaayo Axmed madoobe Oo xalad adag...
XOG:Somaliland oo magaca ‘iska beddeleysa’ si ay aqoosni oga hesho Calamka...